> Resource> Free> Top 5 Best Free MOD Video Editors
Ị na-agba agba n'ahụ maka a MOD edezi ngwá ọrụ? Ọfọn, na nke a oge nke elu eji nkwurịta okwu na online technology, ịchọta ihe ọ bụla agaghị ekwe omume. Otú ọ dị, nsogbu bụ na dị iche iche video edezi ngwaọrụ dị na ọ bụ nnọọ ihe siri ike na-ekpe ikpe nke na otu onye bụ ezi ihe na nke ọjọọ. Ọzọkwa, i kwesịrị ịchọta a ngwá ọrụ, nke ga-dakọtara gị chọrọ kpọmkwem, na-enye mmepụta na ị kpọmkwem chọrọ. Ya mere, otú dị otú ahụ a ma ọ bụ ngwá ọrụ software? Agụ isiokwu a na-a mma na ebinyeghị akụkụ ọ bụla ndu n'elu ise MOD editọ. Isiokwu ga-atụ atụmatụ, uru na ọghọm nke ọ bụla nke ngwaọrụ.
Avidemux bụ a na-ewu ewu video edezi ngwá ọrụ nke bụ gburugburu internet afọ ole na ole. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke video formats ma na-enye magburu onwe atụmatụ na enweghị nkebi nhọrọ na-enye ka ọrụ. The software nwere atọ dakọtara nsụgharị maka Windows, Mac OS na Linux.
Basic video edezi ọrụ;
Free Video Dub bụ fechaa na onye ọrụ-enyi na enyi video edezi ngwá ọrụ. M t akwado a ọnụ ọgụgụ nke video formats gụnyere AVI, MOV, Flv, MOD, MKV, MTS / M2TS na ndị ọzọ. Na ya, ị nwere ike mfe dezie gị video faịlụ site na nanị ihichapụ anya na-achọghị edere. The akụkụ kasị mma banyere ngwá ọrụ a bụ na unu adịghị mkpa re-encode ihe ọ bụla, nke na-eme na mbụ àgwà nke gị video.
MPEG Streamclip bụghị nanị a dị ike video akakabarede ngwá ọrụ, ma na-abịa na otutu atụmatụ na-enye ka ọrụ. Ọ na-akwado dị iche iche video formats VOB, PS, M2P, MOD, VRO, DAT, MOV, DV, AVI, MP4, TS, M2T, MMV na ndị ọzọ. Ọ gụnyekwara mfe adịghị n'ahịrị edezi, cropping na egbuke gburugburu ọrụ, bụ nke na-ya oké ngwá ọrụ maka edezi gị videos, karịsịa ma ọ bụrụ gị oru ngo-eji video si ọtụtụ dị iche iche na isi mmalite ndị mkpa dabara na otu usoro.
Nwere ike tọghata a nso nke ọzọ video faịlụ;
Nwere a glitched bọtịnụ na window.
Ọ bụla Video Ntụgharị bụ a na-ewu ewu faịlụ akakabarede ngwá ọrụ, nke mfe tọghata MOD faịlụ na n'akụkụ na ọ atụmatụ ibu nke akakabarede nhọrọ si otu video faịlụ ọzọ. Ọ nwekwara ike akara dị ka a video edezi ngwá ọrụ, nke nwere ike ije ozi multiple nzube ya na nkenke.
VSDC Free Video Editor dị ike video edezi ngwá ọrụ, nke bụ kpam kpam free na ewu nnọọ ewu. Ọ na-akwado a dịgasị iche iche nke video formats gụnyere MOD, AVI, MP4, MKV, mpg, WMV, 3GP, FLV. E wezụga nnọọ isi video edezi ọrụ, a ụyọkọ nzacha nwere ike atụgharị ọbụna a juru video usoro n'ime a classy pro-àgwà nkiri, mgbe ọtụtụ puku video na ọdịyo mmetụta conveniently grouped n'ime anọ edemede-enyere gị aka na-eme gị video anya na-ada ọzọ ike .
Filmora Video Editor bụ a ọzọ dị ike video edezi ngwá ọrụ. Ọ nwere kenkwukorita interface na ojiji-enyi na enyi nhọrọ akwado ka ọrụ: nhọrọ ma ọ bụ atụmatụ ndị dị mfe ịghọta na interface na-simplified maka inye ala nke arụmọrụ ka ọrụ. Ugbu a ibudata na-agbalị ya onwe gị.